दही खाने गर्नुभएको छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला, यस्तो बन्दै छ हजुरको शरीर ! डाक्टरको भनाइ यस्तो छ - Babal Khabar
दहीको स्वाद मात्र स्वादिष्ट हुँदैन कि यसले शरीरमा लाग्ने कैयौँ रोगबाट पनि छुट्कारा दिलाउँछ ।
शरीरका लागि निकै स्वस्थकर मानिने दहीले मुटुरोगको सम्भावनाबाट समेत बचाउने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
५५ हजार आठ सय ५५ जना मानिसमा गरेको अनुसन्धानपछि यस्तो निष्कर्ष निस्केको हो । यी हुन् अध्ययनले निकालेका निष्कर्ष :
नियमित डाइटमा दहीको मात्रा बढाउँदा मुटुलाई स्वस्थ राख्नुका साथै यससँग जोडिएर आउने रोगको सम्भावनाबाट पनि बचाउने काम गर्छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
अमेरिकन जर्नल अफ हाइपरटेन्सनमा छापिएको एक स्टडीमा खानासँग दहीको प्रयोग गर्दा वयस्क मानिसलाई हाइपरटेन्सनको समस्याबाट छुट्कारा दिलाउँछ ।
५) लसुनमा ४०० भन्दा बढी भिटामिन तथा खनिज पदार्थ रहेको हुन्छ । लसुन नाम जस्तै मानवको लागी सुन भन्दा पनि अति महत्वपूर्ण रहेको चिकित्स्या बिज्ञानका विशेषज्ञहरुको भनाई छ । यो खबर साभार गरियको हो।
Prevवि’वाहपछि च’म्किन्छ यी राशी हुने व्यक्तिको भाग्य !
nextश्रीमानलाई खुसी बनाउने यस्ता १० टिप्स् !